1 PITA ๔:๘
 Ọ bụrụ na anyị achọọ ịnata onyinye ndị a nile, anyị kwesịrị ime ihe karịrị ịtụkwasị Chineke obi nanị; anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụ ndị dị mma. Ma ịdị mma abụghị nanị ọrụ dịrị anyị. Anyị kwesịkwara ịga nꞌihu ịmụta ihe nile banyere Chineke. Ihe ọzọ anyị ga-atụkwasị nꞌelu ihe ọmụma bụ mmụọ nke emebigaghị ihe ọ bụla oke, ka anyị si otu a bụrụ ndị nwere ntachi obi na ndị dị nsọ. Mgbe anyị mere nke a, anyị ga-agakwa nꞌihu ime ka ihe gbasara ndị ọzọ na-adị anyị mma. Nke a ga-eme ka ịhụnanya anyị nwere nꞌebe ndị ọzọ nọ baa ụba.
Nꞌihi nke a, dị ka anyị si nwee oge, ka anyị na-arụ ezi ọrụ nꞌebe mmadụ nile nọ, ma nke ka nke, ka anyị na-arụ ezi ihe, karịsịa, nꞌebe ụmụnna anyị nꞌime Kraịst nọ.
Unu ejila ihe ọjọọ akwụghachi ihe ọjọọ e mere unu, ma ọ bụ gwa mmadụ okwu ọjọọ mgbe ha gwara unu okwu ọjọọ. Kama kpeenụ ekpere ka Chineke gọzie ha, nꞌihi na anyị kwesịrị ịbụ ndị na-emere ndị ọzọ ebere. Chineke ga-agọzikwa unu nꞌihi ya.
Ndị obodo a nwere ọmiko nꞌahụ anyị. Ha kwanyeere anyị ọkụ nke dị ka ọkụ e ji esi ite, nꞌakụkụ mmiri ahụ iji ịchụrụ anyị oyi na iji sị anyị “Unu abịala.”